လင်းသန့်| November 14, 2012 | Hits:1
| | အိုဘားမား၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်သည် မြန်မာ့ အပြောင်းအလဲ အပေါ် အမေရိကန်တို့၏ အခိုင်အမာ ထောက်ခံမှုကို ပြသမှုလည်း ဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
မြန်မာကို လုံခြုံရေး အကူအညီ ကန့်သတ်မည့် အမေရိကန် ဥပဒေကြမ်း သမ္မတရုံး ဝေဖန်ISIS စစ်သွေးကြွများကို ချေမှုန်းမည်ဟု အိုဘားမား ကတိပေးမြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက် တရုတ်နိုင်ငံကိုပဲ အားကိုးနေမလားအာဆီယံ၏ အားနည်းချက်က တရုတ်အတွက် အားသာချက် ဖြစ်နေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန်တွေ မေ့ပြီလား
KHINE ZAR THWE November 15, 2012 - 2:38 pm အမေရိကန်သမတကြီး မြန်မာပြည်လာတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် အဲ့ဒီလို လူမျိုးကို အလွန်မှလည်းတွေ.ချင်ပါတယ် တရုပ်ကတော့မကောင်းတတ်လို. ရှောက်ပြောနေတယ် ရင်ထဲကတမျိုး အပြောကတမျိုးဆိုတာ သိသာပါတယ် (အဆီအနှစ်တွေစားထားတဲ့ ၀မ်ကျားပေါင်) အထူးပြောချင်တာကတော့ တရုပ်ဆိုအယုံအကြည် လုံးဝမရှိပါဘူး တရုပ်လက်အောက်တော့ မရောက်ချင်ပါ အမေရိကန် လို လူ.အခွင့်အရေး တန်ဖိုးထားတဲ့ သူရဲ.အောက်ကျခံရတာတော်ပါသေးတယ်….
Replyုကိုကို November 17, 2012 - 2:09 pm ဘယ်သူ့လက်အောက်မှ မနေလိုပါ…… KHINE ZAR THWE သူများလက်အောက်မှာနေတာကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တယောက်ထဲ သွားနေပါ။တရုပ်ရောအမေရိကန်ရော ပေးဖို့လာခြင့်းမဟုတ် ရယူဖို့လာခြင်း သူ့အကျိုးမရှိဘဲနဲ့တော့အလာကား လာပြီးမြန်မာတွေကိုချစ်လို့ပါ တရုတ်ထက်ပိုချစ်ပါတယ်လို့တော့ လာမပြောမှာသေချာတယ်……သူ့အကျိုးကိုယ်အကျိုးနှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရပြီပေါ့…..